Bafuna kulungiswe olwamanzi eSweetwaters | News24
Bafuna kulungiswe olwamanzi eSweetwaters
ABAHLALI base-Sweetwaters bakhala ngesikweletu samanzi esikhulu abathi basinikezwa umasipala bengazi ukuthi sivelaphi. Laba bahlali bathi bafuna ukwazi ukuthi kungani izikweletu zabo zamanzi ziphezulu kangaka.
Abanye abakhulume ne-Echo bathe ngaphimbilini imali ebekumele bayikhokhe ngenyanga ibingadluli emalini engango-R500, kodwa manje bayaye bathole izincwadi ezithi abakhokhe imali elinganiselwa ku-R5 000 kuya phezulu ngenyanga.
Omunye wabahlali okhulume ne-Echo uthe okubaxaka kakhulu ukuthi akekho umsebenzi wakamasipala uMsunduzi oyaye afike azobheka imitha lamanzi ngaphambi kokuba bathunyelelwe izincwadi zokuthi kumele bakhokhe malini. “Usithumela kanjani isikweletu ungazange uyibheke imitha. Wazi kanjani ukuthi umuntu usebenzise amanzi kangakanani? “Ngaphezu kwaloko kule ndawo sibhekene nenkinga yokungabi nawo amanzi, kuke kuphele ngisho isonto singenawo kodwa sizothola isikweletu semali engaka. “”Mina nje enyangeni kaMasingana ngithole isitatimende esithi ngikweleta imali engu-R6 500. Kanti amanzi anjani lawa ebesiwasebenzisa asengaze afike enanini elingaka ngenyanga eyodwa,” kubeka umhlali. Amanye amalunga omphakathi athi inani ekumele alikhokhe liyahluka inyanga nenyanga, kwesinye isikhathi lifika limba eqolo kwesinye isikhathi lifike lehlile bengazi ukuthi kwenzeka kanjani.
“Lento eyenzakalayo izosusa umsindo nje ngoba akekho umuntu ozovuma ukukhokhela lamanzi ekuthiwa asiwakhokhele izimali ezishisiwe. Okokuqala kunamapayipi amaningi kabi avuzayo angalungisiwe umasipala ayekade ebikelwa ngawo kodwa akezi ukuzowalungisa. “Lawo manzi ahleli exhaxhaza zonke izinsuku akhokhelwa ubani?” kusho elinye ilunga lomphakathi nalo elingathandanga kuzidalula.
Elinye ilunga lomphakathi lithe: “ Mina nje isikweletu enginaso silinganiselwa ku-R6 000 kodwa akukho muntu ofikayo azobheka imitha, sekuthiwa mina angikhokhe imali engingayazi. “Kwakungcono kabi nje amanzi ethu esangaphansi koMngeni engakangeni ngaphansi kukamasipala. Kwakufika abantu abazobheka amamitha kanti futhi sasingatholi nje izincwadi ezisho izimali ezinkulu kuthiwa siyazikweleta,” kubeka yena. Okhulumela umasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha akayiphendulanga imibuzo abethunyelelwe yona. ...